Warshadda Kaydinta Kaabista Shiinaha iyo soosaarayaasha | Kangyuan
• Waxay ka sameysan tahay maadada-sunta ah ee caafimaadka — darajada PVC, hufan oo jilicsan
• Si dhammaystiran u dhammee indhaha indhaha iyo dhammaadka durugsan ee dhaawaca ka yar xuubka dheecaanka ee tracheal.
• Isku xiraha nooca T iyo isku xiraha toobinta ee la heli karo.
• Isku xira midabbeysan si loo aqoonsado cabbirro kala duwan.
• Lagula xidhiidhi karo xiriiriyeyaasha Luer.
Xirxirida: 100 kumbiyuutarro / sanduuq, 600 kumbiyuutarro / kartoon
Cabbirka kartoonka: 60 × 50 × 38 cm
Badeecadan waxaa loo isticmaalaa himilada xaakada.
Badeecadani waxay ka kooban tahay kateetarka iyo isku xiraha, catheter-ka waxaa laga sameeyay maadada PVC ee heerka caafimaadka. Dareen-celinta cytotoxic ee sheygu kama badna fasalka 1-aad, mana jiraan wax dareen-celin ah ama fal-celinta kicinta xabka. Wax soo saarku waa inuu nadiif ahaadaa, haddii lagu nadiifiyo daawada 'ethylene oxide', waa inuusan ka tagin wax ka badan 4mg.
1. Marka loo eego baahiyaha caafimaad, xulo tilmaamaha ku habboon, fur boorsada wax lagu duubo, hubi tayada alaabta.
2. Caarada tuubada xaakada waxay kuxirantahay kateetarka nuugista cadaadiska xun ee xarunta kiliinikada, iyo dhamaadka kateetarka nuugista xaakada waxaa si tartiib tartiib ah loogu geliyay bukaanka afkiisa marinka marinka si looga soo saaro xaakada iyo dheecaanka hawo mareenka.
Wax diidmo ah lama helin.
1. Kahor isticmaalka, tilmaamaha saxda ah waa in lagu xushaa iyadoo loo eegayo da'da iyo miisaanka, waana in la tijaabiyo tayada wax soo saarka.
2. Fadlan hubi ka hor intaadan isticmaalin. Haddii badeecad keliya (la buuxiyey) la ogaado inay leedahay shuruudaha soo socda, waa mamnuuc in la isticmaalo use
a) Taariikhda dhicitaanka ee nadiifinta st
b) Hal xirmada alaabtu ay dhaawacan tahay ama ay leedahay arrimo shisheeye.
3. Badeecadan waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo kiliinikada hal mar, oo ay ku shaqeeyaan oo ay u adeegsadaan shaqaalaha caafimaadka, lana baabi'iyo isticmaalka ka dib.
4. Nidaamka isticmaalka, isticmaaluhu waa inuu si habboon ula socdaa isticmaalka alaabta. Haddii ay dhacdo shil kasta, isticmaaluhu waa inuu joojiyaa isticmaalka badeecada isla markiina shaqaalaha caafimaadka ay si fiican ula macaamilaan.
5. Badeecadani waa jeermiska ilkaha ee loo yaqaan 'ethylene oxide', jeermis dhalisna waa shan sano.
6. Xidhmada ayaa waxyeello gaadhay, markaa isticmaalku waa mamnuuc.
Ku keydi meel qabow, mugdi ah oo qalalan, heerkulku waa inuusan ka badnaan 40 ℃, oo aan lahayn gaaska wax dila iyo hawo wanaagsan.
Hore: Xirmada tuubada tuubada 'Endotracheal Tube'
Xiga: Gelitaanka Helitaanka Neefsashada-Faaruqinta ee Isticmaalka Hal Mar
Kateetarka nuugista PCV
warshad kateetarka nuugista
soo saaraha kateetarka dhuuqa
Soo-saaraha alaab-qeybiyaha kateetarka
Xirmada tuubada tuubada 'Endotracheal Tube'
Maskaxda Laryngeal Mask oo leh Epiglottis Bar